Koorsada shilka ayaa isku koobtay inay ku siiso dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u abuurto su'aalo iyo codsiyo xigashooyin ah oo loogu talagalay alaabadaada iyo adeegyadaada 2020 mahadnaqa Instagram Haddii aad xiiseyneyso Suuqgeynta 'Instagram', koorsadani waxay ku imaan doontaa mid waxtar leh!
Waxaad tahay xirfadle, waxaadna bixisaa adeeg maxalli ah. Haddii aad la yaaban tahay sida loo isticmaalo Instagram si aad aragti uga hesho oo aad uga hesho macaamiil degmada aad ka shaqeyso, tababarkan “Instagram-ka Xirfadlayaashu” adiga ayaa kuu ah.
Sanadka 2020, waxaa badanaa la sheegaa in barta Instagram ay noqotay meel aad loogu tartamo.
Si kastaba ha noqotee, waxaan bilaabay akoon Instagram ah toban bilood ka hor, intii lagu jiray 2019 waxaana hadda raacaya 2 qof, waxaan helayaa kudhowaad 100 taageerayaal cusub maalin walbana waxaan ka helaa fariimo dadka doonaya macluumaadka. Si loo helo koontadan 'Instagram', kaliya ku raadso magacayga, ama guryaha mas'uulka ka ah Eco.
Uma isticmaalo xayeysiis si aan u xoojiyo qoraalladayda.
Kaliya cunno aad u adag iyo istiraatiijiyad daabacaad sheeko, iyo sidoo kale istiraatiijiyad iga dhigaysa inaan ogaado dadka saxda ah ee aan kula wadaagi doono tababarkan aqoonyahannada doonaya inay ugu dambayn helaan ...
Suuqgeynta 'Instagram' ee Xirfadlayaasha Janaayo 10th, 2021Tranquillus
READ Abuur CV iyo warqad dabool leh ereyga 2016
horeClickfunnels ka A ilaa Z by FunnelPirateTV
socdaXayeysiiska Google: Helitaanka ereyada muhiimka ah